Nzira Dzinobudirira Dudziro yeApple App paGoogle Play Chitoro | Martech Zone
Nzira yakapusa yekugovera iyo Android application iri kuburikidza neGoogle Play chitoro. Iyi ndiyo nzira diki yakaoma kusvika kune vakawanda vangangoita vatengi. Kuchinjisa iko kwekutanga kushanda muGoogle Store hakunetsi zvakanyanya, ingo teedzera iwo matipi maviri uye chako application chakagadzirirwa kurodha pasi.
Vagadziri veApple veApple vanovavarira kukupa iwe neyakanakisa kunyorera iyo inogona kugamuchirwa nevazhinji vateereri. Iwe wapedza yakawanda nguva uchigadzira iko kunyorera, zadzisa zvese zvingangoita zvinhu uye upe 100% kuchikumbiro chako. Parizvino, iwo mukana wakanaka wekutumira kunyorera kwako pasi. Vanopfuura bhiriyoni rimwe Android vane simba vatengi vanowanikwa kwese pasirese. Iyi nhanho imwe inokutora iwe padhuze kuti ubate yako yaunoda chinangwa boka.
Kune angangoita mamirioni 2.47 ekushandisa anowanikwa pane Play Store uye kwakatenderedza mazana matatu nemakumi matatu nematatu ekushandisa anotangwa mazuva ese.
Statistics, Nhamba yeApplication muApp Stores 2019
Hapana munhu anogona kuramba kukosha uye kwese kwese kweGoogle Play Chitoro kubva munzvimbo yekushandisa nhare. Kana iwe uchifanira kuziva - maitiro ekuburitsa iko kunyorera paGoogle chitoro chekutamba, panguva iyoyo kutsvaga kwako kunopera pano. Iko kune zano rekuti iwe uteedzere izvo kuti unyatso kuendesa kunyorera pane google yekutamba chitoro. Pakati pemitsara iyi, zvakadii nezve isu kutanga.
Ongorora kunyorera kwako - Chekutanga, iwe unofanirwa kuyedza kunyorera kwako huwandu hwenzira nenzira dzaunokwanisa uye uve zana muzana uine chokwadi chekuti ichaita Zvakanaka, usati waendesa kunyorera pane yekutamba chitoro. Unogona kushandisa emulators nekuda kwechikonzero ichi. Uchishandisa Android-inodzorwa gadget kunounza iyo yekuyedza maitiro ichiwedzera simba. Izvo zvinokupa iwe ruzivo rwekushandisa yako kunyorera pane chaiye gadget uye kukupa iwe simba kuputsa chero chero zviputi.
Concise saizi yekushandisa - Panguva iyo iwe paunenge uchigadzira application, edza kudzikisa saizi yekushandisa. Iko saizi chaiyo yechero application inokoshesa. Vatengi havanzwe kudiwa kwekutora chikumbiro chinotora nzvimbo hombe mumishini yavo yekuunganidza. Chokwadi, kunyangwe Google pachayo inobvumidza saizi yekushandisa kusvika ku50MB. Kana chishandiso chako chakakura, iwe uchazoda APK yekumishumo mishumo kuti ipatsanure kuita zvikamu kuitira kuti igoendeswa. Iwe unofanirwa kuiswa mucherechedzo kuGoogle Play Console uye uve wekuparadzira Play. Kunyangwe paine chokwadi chekuti application yako inodarika ino poindi yekuvharirwa, panguva iyoyo unofanirwa kushandisa Android APK's Kuwedzera rekodhi, kuti ubudirire kutumira chako. Izvi zvinoparadzanisa kunyorera kwako muzvikamu uye Chivabvu yega yega kusvika 2GB, ichipa imwezve 4GB nzvimbo kuchikumbiro chako. Ruzivo rwekuwedzera rwunoiswa muGoogle Cloud uye rwunowanikwa pane chero iko iko iko kunoshandiswa kunoitwa.
Tora App Rezinesi - Hazvikukuvadze kuita kuti chako chikumbiro chibvumirwe kusvikira waendesa kunyorera kuGoogle Play Store.
Fungisisa pane rekodhi yeAPK neBundle ID uye Shanduro Nhamba - Unofanirwa kumisikidza gwaro reAPK maunogona kugovera imwe nhamba yechikumbiro chako iyo ichazokubatsira gare gare paunenge uchida kuendesa mumwe mushumo pachikumbiro chako. Pakiti ID zvakare inonzi App ID uye inoshandiswa kuita chishandiso chimwe chemhando, chikamu chakakosha paunenge uchipa application yako. Izvi zvinogona kunyorera kuzere kwekushandisa kweiyo Android 5.0 kana zvimwe.
Unofanira Kusaina iyo App nezvose Chitupa Chitupa - Ichi chibvumirano chiri kunyorwa seAPK icho chauchazoda pese paunogovera kunyorera kuGoogle Store. Izvi zvinodaidzwa kunzi gwaro reJSK rine zvitupa, semuenzaniso, chirevo cheKeystore chakavanzika.
Gadzira yako App Store Chinyorwa - Kunyorera kunyorera chinhu chakasimba icho chinobatsira chishandiso chako mukutora kurodha pasi. Haasi munhu wese anopa nguva yake pakunyorera chikumbiro asi panzvimbo peapo mukana wekuti iwe uite izvi pamberi peapplication ndima, iwe uchawana zvimwe zvinoshamisa zviitiko. Iwe unofanirwa kupa imwe dhata kune vatengi nezve iyo mhando yekushandisa iyo uye ndeapi maitiro ayo.
Matanho ekuburitsa Anwendung Chishandiso muGoogle Play
Usati watumira application yeGoogle kuGoogle Play, ita shuwa kuti zvese zvakagadzirirwa. Iwe unozoda mamwe ekutorwa echiratidziro echako chikumbiro (mune yakakwira caliber), chimiro chechishandiso uye, zviripachena, gwaro reAPK (iko kuzvishandira pacharo). Kune zvirango zvakakomba zvine chekuita nesaizi yekushandisa. Iyo saizi yakanyanyisa ndeye 100 Mbytes. Zvinogona kusarudzwa kana ichangopfuura makumi mashanu emaMbyte, panguva iyoyo vatengi vanogara munzvimbo dzine network inotyisa vanogona kuwana mukana wekushandisa application. Hedzino nzira dzekuparadzira application yeApple paGoogle Play:
Gadzira akaunzi account - Vhura Google Play Console uye gadzira account yeinjiniya. Zvinodhura zvakadii kugovera iyo Android application? Basa racho rinodhura $ 25. Iwe unobhadhara kamwe chete, rekodhi inokupa iwe mukana wekugovera iyo yakafanana nhamba yekushandisa sezvaunoda chero nguva uye chero nzvimbo.
Nyora zita uye kuratidzwa kwekushandisa kwako - Zvakangwara kufunga nezvazvo usati wagovera. Paunoita kutsvagurudza kutsvaga mazwi ekuona kuti uwedzere iwo kuchiratidzo chako chekushandisa. Chinhu chekutanga chinoonekwa nemushandisi izita rekushandisa, chimwe chinhu chinokwezva chinobatsira kuwana kutarisisa kwemumwe mushandisi! Tarisa inofanira kunge iri pane rinonakidza uye rinotsanangudza zita.
Sanganisira screen skrini - Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti iyo skrini ndeyemhando yepamusoro. Ita shuwa kuti iyo mifananidzo inoratidza zvimwe zvisingaenzaniswi zvakasarudzika zviri mukushandisa kwako, kana iko kwekutanga kufunga kwekushandisa.
Sarudza iyo yemukati chiyero cheako application - Parizvino, iwe unofanirwa kupindura kumibvunzo mishoma kuti usarudze huwandu hwechinhu chako. Zvinotarisirwa kudzikamisa vana kubva mukukopa chishandiso chako mukana wekuti chiine chero chinhu chakura. Iwe zvirinani upindure chaizvo zvimwe zvaucharambidzwa pakuburitsa Android chishandiso kuGoogle Play.
Sarudza kunyoreswa kwekushandisa - Izvo zvakakoshawo pazvikonzero zvekuti inomutsa mikana yako mukutora pasi. Kana iwe ukasarudza chisina kukodzera kupatsanurwa, vanhu havazove nesarudzo yekuzviona mukirasi zvazvinofanira kuve!
Chengetedza nyaya dzekudzivirira - Kana iko kunyorera kuchishandisa kushandisa chero ruzivo rwevatengi rwevamwe iwe unofanirwa kuratidza uye inosanganisira nzira yekudzivirira mauri kuona kuti usashandise ruzivo urwu kuti uwane rubatsiro. Mune chengetedzo zano iwe unofanirwa kuzivisa kune vatengi kuti ndeapi ruzivo achaunganidzwa, kuti iyi data ichafambiswa sei uye ndiani achasvikako.
Icho chokwadi chekuti 42 muzana yevagari vepasi rose vanoshandisa vezvenhau chikonzero chakaringana chekuti ive ndiyo yakanaka chikuva chekushambadzira.
Kana iwe waifunga kuti mushure mekunge wanyatso kuendesa kunyorera kuGoogle Store unogona kuzorora pane ako shrub. Kune zvakawanda zvezviitiko zvinoda kuitwa zvichienda kumberi! Hupenyu hwekushandisa kwako mushure mekutsikisa zvinoenderana newe (kana boka rinokushandira). Yakawanda yenguva, iyo rutsigiro mushure mekuburitswa inoratidza kusvika kwekushandisa uye nemabatiro airi kuita kune vashandisi.
Iyo yakanyanya kubira pano ndeye kugadzirisa kune ako vatengi. Dynamic vatengi ndivo akanakisa magwara. Ivo vanogona kugovana zvinonzwisisika feedbacks kubva kune vechokwadi vashandisi izvo zvinogona kugadziriswa nenzira kwayo. Kana iwe ukashandisa kushoropodzwa kwevatengi senzvimbo yedata yakakosha iwe unowana mikana yese yekusimudzira mari uye kuita kuti iwedzere kuwanda
Kutarisa kugadzira yako wega nharembozha? Batanidza nesu, Sysbunny inotsvaga-yakatsvaga nharembozha yekuvandudza kambani yakagadzira dhizaini yakanaka, uye nekukurumidza inoteerera inoteerera nharembozha yekuvandudza.
Tags: google play storeMobile AnwendungShambadza appshambadzira nharembozhasysbunny